Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguZac
Idizayinwe ngokumangalisayo kwaye igqitywe kumgangatho okhethekileyo, iDesika yindlu enobunewunewu okanye enamagumbi amabini okulala eqhayisa ngomnyango wayo wabucala, i-carport ephindwe kabini kwaye ewe, idesika ebanzi apho ungahlala khona kwaye uthathe umbono omangalisayo. Idekhi inokuqeshwa njengegumbi elinye okanye amabini ngokuxhomekeke kwiimfuno zakho kunye nenqanaba eliqhelekileyo legumbi lokulala elinye, okanye iindwendwe ezimbini.
Indawo yangaphakathi eboniswe ngokugqibeleleyo ebonisa impahla enesitayile kuyo yonke indawo, iDekhi ibonakalisa ibhedi yobukhulu bokumkani kwigumbi eliphambili elinebhedi enkulukazi kwigumbi lesibini, bobabini bonwabele ukupholisa abalandeli besilingi kunye neewodrophu ezakhelwe ngaphakathi ukulwa nayiphi na imiba yokugcina. Indawo eyongezelelekileyo ibandakanya igumbi lokuphumla elamkelekileyo elinomabonakude wescreen esicaba kunye nesidlali seDVD, indawo yokutyela ehlala abantu abane, ikhitshi elixhotyiswe kakuhle, igumbi lokuhlambela elikhazimlayo, kunye nempahla yabucala. Ngaphandle ibonelela ngesetingi yangaphandle ekhululekile kunye nezixhobo ze-BBQ apho undwendwe lunokubonisa izakhono zokupheka! Iilinen ezinqabileyo kunye neetawuli ezithambileyo nazo zinikezelwa.
Yakhelwe yi-Eco yezindlu ezinomgangatho we-10-star yamandla, iDekhi inofakelo lwe-foam eyi-100mm kwiindonga zonke, umgangatho, kunye nophahla oluyigcina ipholile ehlotyeni kwaye ipholile kwiinyanga zasebusika. Impepho epholileyo yaselunxwemeni ibanjwa ngenxa yendawo yayo eyilwe ngobuchule phezu kwenduli, ngoko ke ubutofotofo bonyaka wonke bufunyanwa ngaphandle kwemfuneko yokupholisa umoya.
** Nceda uqaphele: ukuba ubhukisha iindwendwe ezi-1-2, ubhukisha indawo yethu yokulala enye apho ucango lwesibini lwegumbi lokulala lutshixiwe. Ukuba ufuna ibhedi eyongezelelweyo okanye igumbi lokulala, nceda ukhethe iindwendwe ezi-3 okanye ezi-4. umz. ukuba ngabahlobo ababini kwaye ungathanda iibhedi ezi-2 ezahlukeneyo khetha iindwendwe ezi-3.
Indlu yethu ilungele ukuma kwakho ngobusuku obunye, iholide okanye impelaveki efanelekileyo. Idekhi ilungele izibini, iintsapho okanye iqela labahlobo.
IDekhi yindlu enkulu enamagumbi amabini okulala, enomnyango wayo wabucala, i-carport ephindwe kabini kunye nomgangatho obanzi wokuthatha umbono ozukileyo.
Le ndlu inebhedi enkulu yenkosi kwigumbi eliphambili kunye nebhedi enkulu yokumkanikazi kwigumbi lesibini, omabini akhiwe kwiiwadilophu kunye nabalandeli besilingi. Kubonelelwe ngelinen kunye neetawuli, kukho indawo yokuphumla eyahlukileyo kunye nebhentshi yokutyela ukuya kuthi ga kubantu abane, ikhitshi elixhotyiswe, impahla esemgangathweni, iTV yescreen esicaba, iDVD player, indawo ekhululekileyo yangaphandle, amaziko eBBQ kunye nempahla yabucala.
Wamkelekile ukuba uzincede kwigadi yevegie kunye nemveliso yayo yonyaka wonke, emi ngokufanelekileyo kwipropati.
IDekhi ibekwe phezulu ngaphezulu kwedolophu yaseScotts Head endulini, ikunika ukuzola kunye nokubaleka kuzolile.
Intloko yaseScotts ingaphantsi kwemizuzu emihlanu xa uhamba ngemoto ukusuka eSeascape kwaye unokuninzi esinokukunika kona, okubandakanya iilwandle ezibukekayo, iintlobo ngeentlobo zekhefu lokusefa, ulwandle kunye nokuhamba ematyholweni, ihlengesi kunye neminenga yokubukela kunye neendawo zokuthambeka kwezikhitshane elwandle kunye nokuloba emilanjeni.
Idolophu ineklabhu yokubhola, ikhemesti, ivenkile encinci, ibhula, indawo yokubhaka, iinkundla zentenetya, ivenkile yebhotile kunye neekhefi. Iqela laseScotts Head Surf lisandula ukwenza i-makeover kwaye ngoku linikeza iziphungo ezilula kanye elunxwemeni.
Intloko yaseScotts iyaziwa ngokusefa kwayo kwaye ikhefu aliyi kudanisa. Izifundo zokusefa zinokucwangciswa kunye nomqeqeshi oqeqeshiweyo kunye nebhodi yokusefa kunye nebhodi yokukhwela i-paddleboard ukuqasha kuyafumaneka.
Sikholelwa ukuba iNtloko yaseScotts bubuncwane obufihliweyo obuselunxwemeni oza kumthanda!
Kwindawo eseSeascape yikliniki yaseScotts Head Bowen, nceda uqhagamshelane noJo ngolwazi oluthe vetshe okanye wenze idinga.
Kwimizuzu eyi-10-15 yokuqhuba, ufika eMacksville. Uya kufumana i-Woolworths kunye neentlobo ngeentlobo zeevenkile, iikhefi, iindawo zokutyela, ibala legalufa kunye nephuli. Ukuqhubela phambili emantla yiNambucca Heads, apho uya kufumana indawo yokuthenga, ukutya okukhawulezayo, iilwandle ezininzi, iicinema, ukuqesha izikhephe kunye nezinye izinto ezinomtsalane eholideyini.
Kungenjalo emazantsi, malunga nemizuzu engama-35, uya kufika eSouth West Rocks, enamanxweme amahle ngakumbi, iivenkile, iikhefi, iindawo zokutyela kunye nebala legalufa.
Olunye ukhetho lohambo lwemini kuku;
-I-Pub engenaBeer kwiTaylors Arm
- The Bellingen Markets okanye
- Ukuntywila kwi-Scuba eSouth Wests Rocks.
- Intloko yomnqwazi
Umbuki zindwendwe ngu- Zac
Abasingathi uJo kunye noKevin bahlala kwibhloko elandelayo engentla kwaye bafowuna kuphela xa kufuneka
Inombolo yomthetho: PID-STRA-2509-3
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Way Way